Kedu ihe dị iche na etiti ikuku ikuku na igwe ikuku? | Lianchuang
Igwe ikuku bụ ihe eji eme ihe n'oge okpomọkụ. Ha na-n'ozuzu ofu. Maka mma, enwere igwe ikuku na ikuku na ahịa, ọ nweghị nke edoziri. Gini bu ihe di iche n’etiti igwe ikuku na ikuku?
1. Gini bu ihe eji eme ikuku?
Ekwentị mkpanaka ikuku bụ ikuku ikuku nwere ike ịmegharị mgbe ọ bụla ọchọrọ. Enwere ndị nchịkwa, ndị na-ekpochapu ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ eletrik, ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na ikuku na ngwaọrụ ndị ọzọ. A aru na-eji plọg ike na chassis base nwere nke nwere casters. mobile. Ọdịdị bụ ejiji, ọkụ ma dexterous.
2. Gịnị bụ igwe oyi?
Igwe oyi bụ ụdị ngwa ngwa ụlọ na ofufe na ọnọdụ ikuku ikuku. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ dịka ikuku, friji, na iru mmiri. Iji mmiri dị ka ọkara, ọ nwere ike izipu ikuku oyi n'okpuru okpuru ụlọ ma ọ bụ ikuku ọkụ. Imirikiti ndị na-ekuku ikuku nwere nzacha uzuzu iji dozie ikuku. Ọ bụrụ na e nwere akwa nke photocatalyst na nzacha ájá, ọ nwekwara ike ịnwe nsị nsị.
Nke atọ, ọdịiche dị n'etiti igwe ikuku ikuku na igwe ikuku
1. Igwe ikuku na-eji agagharị agagharị nwere obere ihe nlereanya na olu, ọ dịkwa mma ma ga-ebugharị ya. Igwe ikuku ikuku bụ ụdị igwe ikuku na-agbagha site n'echiche ọdịnala ọdịnala, bụ obere, nwere oke arụmọrụ arụmọrụ, obere mkpọtụ, adịghị mkpa itinye ya, enwere ike itinye ya n'ụlọ dị iche iche n'uche.
2. Igwe ikuku na-eji mmiri eme ihe dị ka ọkara ma nwee ike ịnapụta ikuku oyi n'okpuru ime ụlọ ma ọ bụ ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. E jiri ya tụnyere ndị ọkụ eletrik, ndị na-ekpo ọkụ ikuku nwere ọrụ nke ikuku ọhụrụ ma wepụ ihe na-esi ísì. Igwe ikuku nwere ike ọ bụghị naanị igbochi igwe eletrik ka ọ daa, kamakwa nwee mmetụta dị jụụ ma na-enye ume ọhụrụ.
Nke anọ, nke ka mma, igwe eji ajị ikuku ma ọ bụ igwe ikuku
1. Igwe ikuku nwere ike iweda ọnọdụ okpomọkụ site na ihe dịka 5-6 degrees karịa ndị nkịtị, nwere ike ike dị ala, enweghị ọrụ nsị, ma mee ka iru mmiri dị elu mgbe ejiri ya, nke kwesịrị ekwesị maka ebe nwere ihu igwe akọrọ. Mmetụta okpomọkụ na-agbanwe dị ka nke ikuku ikuku ọdịnala. O nwere ike idozi ọnọdụ nke ikuku dị n'ime ụlọ n'ụzọ doro anya, ma nwee ike gbanwee ya na okpomọkụ dị iche iche ka achọrọ. Agbanyeghị, mgbe ejirichara ya, ikuku ikuku dị n'ime ụlọ anaghị adị n'otu, nke dị mfe ịkpata ahụ erughị ala na ọrịa ikuku ikuku. N'otu oge ahụ, ike buru ibu na ike oriri buru ibu.
2. Igwe ikuku na-adọkpụ dị mma maka ọfịs, n'èzí na ebe ndị ọzọ. Ike oriri na ọnụahịa nke igwe ikuku ikuku dịtụ elu.